I-Cozy Lake Front Cabin - I-Airbnb
I-Cozy Lake Front Cabin
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Amy And Tom
U-Amy And Tom Ungumbungazi ovelele
Le khabethe evulekile, kodwa ethokomele ilungele noma yisiphi isenzakalo. Iholide lomndeni, impelasonto yamantombazane, impelasonto yothando noma impelasonto nje yokuphola.
Izinyathelo nje ukusuka echibini! Leli yichibi elincane elithule, elingaphansi kwamakhilomitha amathathu ukusuka edolobheni laseCrosslake. Awukwazi ukufinyelela ngokuqondile i-White Fish Chain nokho, ungakwazi ngokuthutha isikebhe sakho. Lapha, usengajabulela ukunethezeka kwesimo sechibi ngobumfihlo obufisayo.
Itholakala kuBig Pine Lake enedokodo layo langasese lapho ungabopha khona isikebhe sakho. Kukhona ukufinyelela komphakathi ukubeka isikebhe sakho kumayela elilodwa phansi komgwaqo omkhulu.
Kunamakamelo okulala angu-2 anendlu yokugezela phakathi. Igumbi lokugezela linendawo yokugezela encane (asifuni ukuthi umangale). Kukhona nombhede wosuku egumbini lokuhlala ohlinzeka ngemibhede emibili eyengeziwe.
Kukhona ikhishi eligcwele ngokugcwele elinezitsha, ibhodwe lekhofi, i-crockpot nanoma yini ongase uyidinge ukuyipheka ekhabetheni. Kukhona nezinongo eziyisisekelo, amafutha omnqumo ozowasebenzisa. Amanzi “acebile ngensimbi” ngakho-ke ungase ufune ukuza namanzi okuphuza noma ukuwathenga edolobheni.
Kukhona umabonakude onesidlali seDVD/Blue Ray, kanye nenqwaba yemidlalo yebhodi/amakhadi ongadlalwa uma uthanda. Angeke abe khona amamuvi ahlinzekiwe ngakho uma ufuna ukuletha awakho sicela wenze njalo. Kukhona ne-Redbox edolobheni.
Uma ufisa ukungena edolobheni, kunezindawo eziningi zegalofu, izitolo zika-ayisikhilimu, izitolo zezingubo, izitolo zezipho, iMakethe Yomhlanga (igrosa), ngisho nesitolo sikaswidi. Kunezindawo zokudlela eziningi ezinhle nemigoqo endaweni efanayo, okuhlanganisa i-Cedar Chest kanye ne-Andy's. Ngaphezu kwalokho, ungathola izitolo ezimbalwa ze-thrift/antique.
Sithemba ukuthi ukhetha ukuhlala ku-Cozy Cabin yethu!
Ithule, inobungane, futhi iphephile. Ubumfihlo bubalulekile kubo bonke abahlali basechibini.
Ibungazwe ngu-Amy And Tom
Sitholakala ngefoni noma ngombhalo nganoma yisiphi isikhathi. Sivame ukuba sendlini engumakhelwane.
UAmy And Tom Ungumbungazi ovelele